Yakanakisa VDL Series Lineaner Gwara reCNC Vertical Machining Center Mugadziri uye Fekitori | Gadziridza
VDL Series Lineaner Mugwagwa CNC Vertical Machining Center
Iyo yakasarudzika dhizaini yekumhanyisa-kumhanyisa linear rolling giredhi njanji yemuchina chishandiso inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kwemabhokisi zvikamu, goko zvikamu uye disc zvikamu mumuchina wekugadzira indasitiri. Zvikamu zvinogona kupedzwa mushure mekukochekera kwekugaya, kufinha, kuchera, kuwedzera, kudzoreredza, kurova uye mamwe maitiro, nekunyatso kujeka, yakakwira michina, kuvimbika kwakakwirira, degree rakakura rekusanganisa kwemagetsi nemagetsi, mashandiro akareruka, kuonekera kwese kwekunaka uye kwakanaka hunhu. Muchina unogadzirirwa otomatiki chishandiso kuchinjisa system (ATC), otomatiki lubrication system, kutonhora sisitimu uye inotakurika manual oparesheni chishandiso (MPG), ine yakakosha yekudzivirira kavha.
Muchina wekushandisa mubhedha muviri wakakwira simba kukanda simbi kukanda, kukanda chimiro mushure memuchina chishandiso dynamics kuongorora uye kupedzisa element element, inonzwisisika collocation yekusimbisa chimiro, sangano, kugadzikana, kusingaperi kuona mhando. Onai hwaro dzakakwirira Rigidity. Rakafara muchina Ezvemutauro mubhedha mamiriro, mutoro zvizere rutsigiro muchinjikwa yemasiraidhi kunogona nechokwadi kugadzira rinorema mutoro vanokwanisa.
Machine chishandiso ikholamu dhizaini yakakura span herringbone, inovimbisa kukwirira kuomarara uye kukwirira kugadzikana kwekoramu, uye yakagadzirwa nesimba rakasimba kukanda simbi kukanda, kukanda chimiro mushure memuchina chishandiso chine simba kuongorora uye kupedzisa element element, bhokisi bhokisi mhango ine inonzwisisika yekusimbisa chimiro, sangano, kudzikama, simbisa zvidimbu zvekukwirira kuomarara, kuona kuti maitiro ehuremu hunorema huremo. Iyo slide mutungamiriri weyakaomarara kuomesa kurapwa, tai-mune chaiyo kukuya kugadzira, unganidza iwo chaiwo ehunogutsa mhando.
Chokurukisa bhokisi mamiriro neane muganho chinhu chakarongeka statics, simba rekuongorora uye topology ongororo, zvine musoro dhizaini dhizaini uye iyo collocation yekuomesa kuverengera rakasimba rakaomarara bhokisi.
Muchinjikwa feed zvikamu
Muchinjikwa yemasiraidhi muchina chishandiso chakagadzirwa kubva pakakwirira simba kukanda simbi kukanda, kukanda chimiro mushure memuchina chishandiso dhizaini kuongorora uye kugumira element kuongorora, kusunga-mukati uye zvine mutsindo kusimbisa, mutoro uzere rutsigiro rwemuchinjikwa inotsvedza inogona kuve nechokwadi yekugadzirisa inorema mutoro kugona.
Machine tafura yakakwira simba kukanda simbi kukanda, kukanda chimiro mushure memuchina chishandiso dynamics kuongorora uye kupedzisa element kuongorora, tie-in uye zvine mutsindo kusimbisa, muchinjikwa mutserendende pasi pemamiriro ezere mutoro rutsigiro kuve nechokwadi chekuti maitiro eanorema mutoro kugona. Onai hwaro dzakakwirira Rigidity. Workbench pamusoro zvakare inogona kuwedzera kudzimisa kurapwa, kumeso kuomarara kweHRc50 (sarudzo).
Yekumhanyisa, yakakwira chaiyo yekukona: kuburikidza neakakwira torque inowirirana ine toothed bhandi dhiraivha, usatsvedza, uye inogona kudzikisira ruzha rwekupisa ruzha uye inogadzirwa. Main mugodhi adopts zvakarurama pamwero Angle bhora akatakura, mureza kumhanya anosvika 8000 R / min. Yakakwira-yekuita chokurukisa inobereka girisi lubrication, hupfumi chokurukisa musoro, kutonhora sisitimu, zvinobudirira kudzora chokurukisa tembiricha simuka pane yakakwira kumhanya. Main mugodhi nokushandisa IRD simba mwero calibration michina, akananga kururamisa chokurukisa simba nechiyero, kuti chokurukisa ari kumhanya, kudzivisa kubereka resonance Fani, kuitira yakanakisisa machine zvakarurama.
Yekumhanyisa, yakakwira chaiyo yekukona: kuburikidza neakakwira torque inowirirana ine toothed bhandi dhiraivha, usatsvedza, uye inogona kudzikisira ruzha rwekupisa ruzha uye inogadzirwa. Main mugodhi adopts zvakarurama pamwero Angle bhora akatakura, mureza kumhanya anosvika 8000 R / min.
X, Y akabatana feed uchishandisa iyo inoyerera inotenderera gwara njanji rutsigiro, Z akabatana kutora zvishoma nezvishoma mumatope gwara rutsigiro, yakakwira kunyatsoita, yakanaka kutakura kuita, kuverengera kumisikidza chaiyo yemuchina chishandiso uye kudzokorora kumisikidza kururamisa.
Icho chishandiso chishandiso chiri padyo nesarudzo yekushandisa uye iri Bamboo Rudzi (20 Bhawa), inova pneumatic uye yemagetsi kudzora, isina kusvibiswa, nyore kuchengetedza, uye chinjanai chishandiso chinokurumidza uye chakavimbika. Arm Type Toolpost chishandiso (Inesarudzo Yekuwedzera): iro banga reiyo ndeye 24, iyo yakapetwa ruoko ruoko mhando otomatiki banga ruoko uye CAM inoshandura muchina, inotyairwa nemota, inomhanya uye yakasimba. Iyo yekuchaira uye yekumisikidza mashandiro ehukuru hukuru hweanocheka, mota uye dhiramu CAM, kudzikama kwakakwirira.
Muchina unogadzirirwa zvizere yakavharirwa nhoo, yakanaka, yakachengeteka, inodonhedza, chengetedza nharaunda. Yakavharirwa gwaro nhoo sino-isu mubatanidzwa wekusarudza nekutenga gungwa nigel Taiwan inozivikanwa brand zvigadzirwa zvigadzirwa, inoshanda dziviriro gwara njanji uye sikuruu inofamba zvikamu, kuwedzera hupenyu hwayo hwebasa. Spiral otomatiki chip yekubvisa chishandiso ipfupi, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, inoshanda kune simbi uye isiri-yesimbi chip ichiendesa
CNC yekudzvanya sisitimu inotora yakajairwa kumisikidzwa yeFANUC 0 I MF (5) iyo yekuverenga control system, iyo yekudzoreredza system inogona kuona mashanu akabatana mana kubatana. Imwe sarudzo yekusarudzika.
Pashure: CNC Gear Kucheka Machine
Zvadaro: VDF Series Bhokisi nzira CNC Vertical Machining Center
Chinhu VDL600 VDL850A VDL1000 VDL1200 VDL1300
Woktable Kukura 800 * 420mm 1000 * 500mm 1120 * 560mm 1220 * 620mm 1300 * 560mm
Inoshanda T-Slot 3 * 18 * 125mm 5 * 18 * 100mm 5 * 18 * 100mm 5 * 18 * 100mm 5* 18 * 100mm
Basa Rinoshanda 500kg 600kg 750kg 1200kg 750kg
X / Y / Z-Akisi Kufamba 620/440 / 540mm 860 * 510 * 560mm 1040 * 580 * 620mm 1220 * 620 * 685mm 1290 * 580 * 620mm
Chokurukisa Speed 8000rpm 8000rpm 8000rpm 6000rpm 8000rpm
Chokurukisa Taper Nha. 40 (7:24) Nha. 40 (7:24) Nha. 40 (7:24) Kwete 50 (7:24) N40. (7:24)
Chishandiso Magazini Kugona 24 Bhawa Arm Rudzi 24 Bhawa Arm Rudzi 24 Bhawa Arm Rudzi 24 Bhawa Arm Rudzi 24 Bhar Arm Rudzi
Machine Kurema 4600kg 5600kg 7000kg 8500kg 7200kg
Saizi yeMuchina 2413 * 2451 * 2549mm 2496 * 530 * 2679mm 2800 * 2671 * 2820mm 2990 * 2621 * 2759mm 3100 * 2671 * 2820mm
FANUC 0i MF (5) Mutungamiriri
Nokia 828D Mutungamiriri
24 Bhawa Arm Type turu yekushandisa
20 Bhawa Bamboo Type chishandiso chemagazini
Spiral chip inobvisa uye chip yekuchengetedza mota
X / Y / Z-Sekaiichi Mugwagwa Kudzivirirwa Cover
Chokurukisa mafuta kutonhora mudziyo
Otomatiki lubrication system
Otomatiki kuyera sisitimu yekushandira
Chishandiso kuputsa kuona system
Iyo 4-Axis Rotary Tafura
Magetsi bhokisi kupisa exchanger
Chokurukisa mhepo keteni kudzivirira guruva
Chokurukisa taper mugomba blower
Workpiece kutonhora system
Iyo RS - 232 interface uye mashandiro eDNC
Vhura musuwo wedziviriro mudziyo (musuwo)
Kuvhuvhuta guruva mweya pfuti
Yakapusa oiri-mvura yekuparadzanisa
Nheyo mabhaudhi uye block
Operation Chinyorwa, Kurongedza Chinyorwa, Chitupa cheMhando
Yekumhanyisa Machining Center
VDF Series Bhokisi nzira CNC Vertical Machining Center
Horizontal Lathe CDS-BSeries 82mm chokurukisa Bore ...